रुपन्देहीमा शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान जारी
बुटवल, असार १४
स्थानीय तह दोश्रो चरणको निर्वाचन अन्तर्गत रुपन्देही जिल्लामा पनि विहान ७ बजे देखि नै मतदान सुरु भएको छ। १ उपमहानगरपालिका, ५ नगरपालिका र १० गाउपालिका रहेको रुपन्देही जिल्लामा शान्तिपूर्ण रुपमा मतदान सुरु भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रुपन्देहीले जानकारी दिएको छ।
जिल्लाका विभिन्न शिर्ष नेताहरुले विहानै ७ बजे देखि नै मतदान शुरु गरेका छन्। जिल्लाको एक मात्र उपमहानगर बुटवल उपमहानगरपालिकामा नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं पुर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वडा नं‌. ८ मा रहेको डिभिजन सडक कार्यालयको मतदान स्थलबाट ७ बजे मतदान गरेका छन्। मतदानपछि संक्षिप्त प्रतिकृया दिंदै नेता पौडेलले यो निर्वाचन संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो भएकोले विगतको भन्दा महत्वपूर्ण भएको बताए।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पुर्वरक्षामन्त्री बालकृष्ण खांणले तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नं। ८ स्थित ज्योति आदर्श निमाविको मतदान स्थलबाट मतदान गरेका छन्। एमालेकै उपमहासचिव घनश्याम गौतमले तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नं. ९ स्थित गौतमबुद्ध आदर्श सिसु सदनमा मतदान गर्दै छन्।
भैरहवामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका बरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक बोहराले सिद्धार्थनगरको वडा नं। ३ बाट पहिलो मतदान गरेका छन्।
प्रदेश नम्बर ५ को केन्द्रको रुपमा हेरिएको बुटवल उपमहानगरपालिका मेयर पदका उम्मेदवारहरुले पनि विहानै मतदान गर्न लामबद्ध लागेका थिए। एमालेको तर्फबाट मेयर पदका उम्मेदवार शिव सुवेदीले बुटवलको वडा नंं ७ मा रहेको सिद्धेश्वरी लालकुमारी माध्यमिक विद्यालय र नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट मेयर पदका उम्मेदवार खेलराज पाण्डेले डिभिजन सडक कार्यालयको मतदान स्थलबाट मतदान गरेका छन्।
बुटवल उपमहानगरपालिकामा १९ वटा वडाहरुबाट ९७ जना जनप्रतिनीधिहरु चुनिदै छन्। बुटवलमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संयुक्त गठबन्धन रहेको छ भने नेकपा एमाले एक्लै चुनावमा लडेको छ। बुटवल उपमहानगरपालिकामा मात्र जम्मा ६६ हजार ६ सय ४३ मतदाता रहेका छन।
यता जिल्लाको पश्चिम दक्षिण क्षेत्र मर्चवारमा पनि विहानै देखि मतदान सुरु भएको छ। राजपाको बलियो पकड क्षेत्र रहेको दक्षिणी क्षेत्रमा राजपाकै कार्यकर्ताले स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दिएपछि त्यस क्षेत्रमा पनि चुनावी रौनक बढेको थियो।
२० वर्षपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाताहरु उत्साहित भएर बिहानैदेखि मतदान स्थलमा लाइन लागेका छन्। रुपन्देही जिल्लामा ४ लाख ६२ हजार ५ सय ४६ मतदाता, २ सय ८ मतदान स्थल तथा ५ सय ४३ मतदान केन्द्र रहेका छन्।
निर्वाचनबाट जिल्लामा ८ सय ४५ जनप्रतिनिधी चुनिने छन्। जिल्ला सुरक्षा समितिले सैनामैना, देवदह, सिद्धार्थ नगरपालिका, सियारी, ओमसतिया, कञ्चन र गैडहवा गाउपालिकालाई संवेदनशिल क्षेत्रको सूचीमा राखेको छ।
रुपन्देही जिल्लाको कोटहीमाई गाउंपालिका वडा नंं १ को भने मतदान असार १६ गते हुने भएको छ । वडा नम्बर १ का माओवादी केन्द्रको तर्फबाट खुल्ला तर्फका सदस्य उम्मेदवार मुरली मल्लाहको मृत्यु भएपछि सो वडाको मतदान असार १६ गते गर्न लागिएको प्रमुख निर्वाचय अधिकृत मुरारीबावु श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। रुपन्देही जिल्लामा २ जना तेस्रो लिंगीले समेत उम्मेदवारी दिएका छन्।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार १४, २०७४ ०९:४०:५३